AGT အစီအစဉ်တွေကို ကျနော့်လိုပဲ နှစ်သက်ကြသူ မိတ်ဆွေတွေ ရှိနေလို့ `စိတ်ညစ်နေလား´ ပို့စ်ကို တင်ရတာ အားရမိပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ အစီအစဉ်ကလဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုပြီး ယှဉ်ပြိုင်မှု ပြင်းထန်လာတယ်ဆိုတော့ ကြည့်ရတဲ့သူတွေကို ပိုပြီးတော့ ရသပေးနိုင်လာပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ AGT ရဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ် အဆင့်မှာ ယှဉ်ပြိုင်သွားကြသူတွေ အနက် ထူးခြားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ၊ ဖိုင်နယ်လ်အဆင့်ကို ရောက်လာနိုင်သူတွေကို ရွေးချယ်တင်ဆက်ပါမယ်။ ဖိုင်နယ်အဆင့်ကျရင်တော့ ယှဉ်ပြိုင်သူ အယောက် (၂၀)လုံးရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံတွေကို ကြိုးစားရှာဖွေ တင်ဆက်ပေးဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ ကြည့်ရတာ ပိုပြီး အရသာရှိအောင်ပေါ့...။
The Cadence လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ လူငယ်လေးတွေကို ပထမအဆင့် ပြိုင်ပွဲဝင်စဉ်တုန်းက ဒိုင်သုံးယောက်အနက် Sharon က No လို့ ငြင်းခဲ့တာပါ။ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို သာမန်အားဖြင့် အမြဲတစေလိုလို Negative မြင်လေ့ရှိတဲ့ Piers က `ငါ ပရိသတ်တွေ ဆန္ဒအတိုင်း လိုက်လျောလိုက်မယ်´ ဆိုပြီး Yes ပေးခဲ့လို့သာ ဒီအဆင့်အထိ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရခဲ့တာပါ။ အခု ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာတော့ သူတို့ ပိုပြီးကြိုးစားထားပေမယ့် ပထမဆုကို ရဖို့ကတော့ လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
Queen Emily လို့ အမည်ရတဲ့ ဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာ အသက်လေးဆယ်ကျော် Single Mother တယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ ပထမအဆင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ဟန်ကို ကျနော် မဖော်ပြဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ စိတ်ထဲမှာ သူက Emotion သိပ်များလွန်းတယ်လို့ ထင်ပြီးတော့ ဒီလောက်အဆင့်ကို ရောက်လာမယ်လို့ မထင်ခဲ့မိတာလဲ ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့် အပြီးမှာတော့ သူဟာ ပထမဆုရဖို့အတွက် First Runner လို့ ဒိုင်က မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ တကယ်လဲ ရသွားနိုင်ပါတယ်။ လားဗေးဂတ်စ်မြို့မှာ အကြိုဆီမီးပြိုင်ပွဲဝင်ကြတော့ သူမပြောတဲ့ စကားတခွန်းကတော့ မှတ်သားစရာပါ။ `ဒါဟာ ကျမအတွက်ပြိုင်ပွဲ မဟုတ်ဘူး၊ ကျမဘ၀ရဲ့ စွန့်စားမှု တခု´ လို့ ပြောခဲ့တာပါ။
The Wright Kids လို့ အမည်ရဲ့ အဖွဲ့လေးမှာ ပါဝင်တဲ့ ကလေးလေး သုံးယောက်ရဲ့ သီဆိုပြိုင်ပွဲဝင်ဟန်လေးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိဟန်လေးတွေပါ။ ဒိုင်တွေ သဘောအကျဆုံးကတော့ အငယ်ဆုံးကလေးလေးကိုပါ။ တယောကြီးကို မနိုင့်တနိုင်နဲ့ မပြီး ထွက်လာပုံလေးက ချစ်စရာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ဒီကလေးတွေရဲ့ ပထမအဆင့်တုန်းက ပြိုင်ပွဲဝင်ဟန်ကိုတော့ ယူကျုမှာ လိုက်ရှာလို့ မတွေ့လို့ အခုတင်ထားတာနဲ့ပဲ ကျေနပ်မယ် ထင်ပါရဲ့...။
AGT အစီအစဉ်မှာ ထူးခြားတာကတော့ အသက်အရွယ် ဘယ်လောက်ရှိရမယ်လို့ မသတ်မှတ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့်လဲပဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လေးနှစ်သမီးကလေးကလဲ ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်သလို အခု တင်ဆက်ထားတဲ့ အသက် ၇၂ နှစ်အရွယ် အဘိုးဟာလဲ အဆိုကောင်းပါ။ အခု ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ဒိုင်သုံးယောက်စလုံးက မတ်တပ်ရပ် ချီးကျူးခံရတဲ့ အနည်းစုထဲမှာ တယောက်အပါအ၀င်ပေါ့...။ ပထမအဆင့်တုန်းက သူ ပြိုင်ပွဲဝင်ထားတာကိုလဲ ရှုစားနိုင်ပါတယ်။
ကျနော် နှစ်သက်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Eli Mattson ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ဟန်ပါ။ ပီယာနိုတီးတာရယ် သီချင်းဆိုတာရယ် နှစ်ခုတည်းပေမယ့် သူ့ရဲ့ သီဆိုဟန်က Talent အပြည့်ရှိပါတယ်။ ပထမအဆင့်တုန်းက သူသီဆို ပြိုင်ပွဲဝင်ထားတာကိုလဲ ဒီမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို သေချာပေါက် ရောက်လာမယ့်သူ လို့ ထင်မိပါတယ်။
Nuttin but Strings လို့ အမည်ရတဲ့ လူငယ်ညီအကို နှစ်ယောက်ရဲ့ တယောတီးဟန်ဟာ အားမာန်လဲ ပါသလို နားထောင်လို့လဲ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကျနော့် အကြိုက်အရ ပထမဆုကို ရစေချင်တဲ့အထဲမှာ ဒီလူငယ်လေး နှစ်ဦးလဲ အပါအ၀င်ပါပဲ။ သူတို့ နှစ်ယောက် ပထမအဆင့်တုန်းက ပြိုင်ပွဲဝင်တုန်းကလဲ နှစ်သက်ဖို့ကောင်းသလို အခု ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာလဲ ဒိုင်သုံးယောက်စလုံးက မတ်တပ်ရပ်ပြီး ချီးကျူးခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့သာ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့ရင် အရင်ဆုံး လုပ်ဖြစ်မှာက အမေ့အတွက် အိမ်တလုံးဝယ်မှာ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို တော်တော် သဘောကျပါတယ်။
ကျနော် နှစ်သက်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တချို့ကတော့ ဆီမီးဖိုင်နယ် အဆင့်မှာပဲ ပြုတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ဖိုင်နယ် အဆင့်ကျရင်ရော...၊ ဘယ်သူတွေ စကာတင် စာရင်းဝင်ပြီး ဘယ်သူတွေ ပြုတ်ကျန်နေခဲ့ဦးမလဲ ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ကြပါစို့...။ အခုပို့စ်အတွက်နဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ စိတ်အစဉ်တွေ တခဏတာဖြစ်ဖြစ် ပြေပျောက်သွားမယ်ဆိုရင် တင်ရကျိုးနပ်ပါပြီ။
ကျနော့် မိတ်ဆွေများ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ...။
Posted by ကလိုစေးထူး at 8:41 PM
Eli Mattson ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ သူ့ သီချင်းဆွေးဆွေးလေးတွေနဲ့သူ့ ပုံစံက လိုက်ဖက်ပြီး နားထောင်ရတာ တော်တော် မိုက်တယ်း) သူလည်းရနိုင်တာပဲ ။
Sep 9, 2008, 1:03:00 AM
ိကိုစေးထူးရဲ့ blog ကို အခုမှ လာလည်ဖူးတာပါ။
တယောတီးတဲ့ ညီအကို ၂ ယောက်ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ.
Sep 10, 2008, 3:23:00 AM
America's Next Top Model ကော မကြိုက်ဘူးလား ကိုကလိုဆေးထူး :P
Sep 10, 2008, 6:32:00 AM
Eli Mattson rockz!!!! Love his voice, love his cool, love his eyes O.O
thanks for this post, brother :)
Sep 11, 2008, 1:07:00 AM